Olee otú dọwara Flash Videos na otu click
> Resource> Video> Olee dọwara Flash Video si weebụsaịtị na ala
Ọtụtụ weebụsaịtị dị ka YouTube embed flash vidiyo na ha peeji nke, nke na-enyere elu abịakọrọ gụgharia video na na na nchọgharị were were. Ma dọwara flash video ndị na weebụsaịtị na-aghọ a nsogbu. Ihe bụ ihe ọzọ, ọbụna ma ọ bụrụ na i bibiri flash video ọma n'ụzọ ụfọdụ, ị gaghị enwe ike na-egwu ha na gị na obere ngwaọrụ ruru format incompatibility. Echegbula ugbu a. Wondershare AllMyTube (AllMyTube for Mac) Ga-a zuru okè ngwá ọrụ iji nyere dozie nsogbu ndị ahụ, nke bụ Nchikota flash Ripper na Ntụgharị. Ka n'iyi oge ọ bụla na-akpali iji hụ otú ọ na-arụ ọrụ n'okpuru.
Mbụ, ka-esi njikere. Download usoro ihe omume na wụnye ya. Rịba ama na e nwere abụọ nsụgharị. Ị kwesịrị ị na-ahọrọ nri otu maka gị na kọmputa. Ndị na-esonụ ga-na uche na windo version ebe ọ bụ na abụọ nsụgharị na-arụ ọrụ fọrọ nke nta na n'otu ụzọ ahụ.
1 Ịchọta flash videos dọwara
Ịnyagharịa nchọgharị weebụ gị na peeji nke a flash video. E nwere ọtụtụ video weebụsaịtị n'ihi na ị na ịhọrọ site na, dị ka YouTube, Hulu, na ndị ọzọ. Pịa video-egwu. Rịba ama na ị kwesịrị ị na-egwu flash videos na otu nke atọ isi nchọgharị: ntụgharị, Firefox na Chrome.
2 Rip flash videos na ụzọ abụọ
Usoro ihe omume na-enye ụzọ abụọ dọwara flash video. Otu bụ site a Download bọtịnụ. Mgbe video na-akpọ, i nwere ike ịhụ a Download button n'elu nri nke video ihuenyo. Pịa ya na-amalite flash video ripping.
Ndị ọzọ ụzọ bụ site URL. Ị pụrụ iṅomi URL nke flash video na adreesị mmanya. Ahụ na-aga ka usoro ihe omume na-pịa Paste URL bọtịnụ. Nke a ga-enyere nweta otu N'ihi.
3 Play flash vidiyo na obere ngwaọrụ
Dị ka e kwuru n'elu, a flash Ripper bụkwa a Ntụgharị, nke na-enyere ị na-egwu flash vidiyo na gị obere ngwaọrụ.
Chọta a tọghata bọtịnụ na nri nke bibiri video na ebudatara n'ọbá akwụkwọ. Pịa ya ma họrọ otu mmepụta usoro. Ị nwere ike họrọ nkịtị formats dị ka AVI, MOV na ndị ọzọ, ma ọ bụ a na ngwaọrụ dị iPad, iPhone na ndị ọzọ. Mgbe ahụ, pịa OK na ọ mere.
Nke a na usoro nwekwara a wuru na-ọkpụkpọ na-egwu flash videos ma ọ bụ vidiyo na ihe ọ bụla ọzọ na-ahụkarị formats. I nwekwara ike mbubata vidiyo na kọmputa gị ka usoro ihe omume si ebudatara n'ọbá akwụkwọ aka jikwaa. Na otú ahụ, i nwere ike ịhụ na-ele gị obodo video mfe. Amagbu, nri? Egbula ibudata ya nwere a-agbalị.
Ekiri a nzọụkwụ-site-nzọụkwụ video nkuzi n'okpuru:
Olee otú iji Gbochie Face na Video